Design Printing Services, Mandalay Map
Mawlamying Map ကို
2. Download Form တွင်ပါသည့် အချက်အလက်များကိုဖြည့်၍ ှ"Submit" ကိုနှိပ်ပါ။
3. Download Form တွင်ဖြည့်ထားခဲ့သော Email သို့ Download Link Email ရောက်လာပါမည်။
To download full and complete Mawlamying Map
Mawlamying Map Download
Promotion လူကြီးမင်း၏ ရုံးခန်း၊ ဧည့်ခန်းများတွင် မြေပုံများကို တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
လူကြီးမင်း ရုံးခန်းနှင့် အစည်းအဝေးခန်းမများတွင် မြေပုံများ တပ်ဆင်နိုင်ရန် Frame များနှင့် အောက်ပါပုံများအတိုင်း အသင့်စီစဉ်ပြီး လှပသေသပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမြေပုံများကို လူကြီးမင်းတို့ နှစ်သက်သောမြေပုံ၊ လိုအပ်သော အရွယ်အစား၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Paper အမျိုးမျိုးနှင့် (ဥပမာ - Photo Paper, Vinyl, Inkjet Paper) ဖြင့် ပုံကြီးများချဲ့၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့် Plotting ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ မြေပုံပေါ်တွင်လည်း လူကြီးမင်း၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ တည်နေရာများကိုလည်း မြေပုံပေါ်တွင် ထည့်သွင်းဆာင်ရွက် ပေးနိုင်ပါသည်။
DPS ရဲ႕ GPS REAL TIME CAR DVR
၁။	ကားအရှေ့ Color နှင့် အတွင်းဘက်ကင်မရာ Back & White ပါရှိခြင်း။
၂။	ကားသွားရာလမ်းကြောင်းကို GPS စနစ်ဖြင့် သိရှိနိုင်ခြင်း။
၃။	တပ်ထားသောကင်မရာအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ Live View ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
၄။	Video Record များအား SD Card နှင့် သိမ်းပြီး Download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
၅။	Video File များကို HD Resolution ဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်း။
၆။	မြင်ကွင်းကို 150° နှင့် မြင်ရသောကြောင့် မြင်ကွင်းကျယ် မြင်ရခြင်း။
၇။	နှစ်စဉ်ကြေးမပေးဆောင်ရသော အားသာချက်ရှိခြင်း။
၁။ ယာဉ်၏တည်နေရာနှင့် သွားရာလမ်းကြောင်းကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ယာဉ်အားလုံးကိုတပြိုင်နက် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
၂။ Internet လိုင်းမမိချိန်၌ ပြတ်တောက်ထားမှုကို Internet ပြန်ရချိန်တွင် Data ကို Server ပေါ်သို့ ပြန်တင်ပေးခြင်း။
၃။ Real Time စနစ်အတွက် MPT, Telenor Sim Card များကို အသုံးပြု၍ ရခြင်း။
၄။ ယာဉ်၏ Total Mileage (km) နှင့် Data များကို Excel file ဖြင့်ရယူသိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း။
၅။ ကိုယ်သွားလိုသော Location ကို ကြိုတင်၍ Way Plan ဆွဲထားနိုင်ခြင်း။
၆။ 12V ~ 24V ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ / နှစ်စဉ်ကြေးမပေးဆောင်ရသော အားသာချက် ပါရှိခြင်း။
၇။ Speed သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Route သတ်မှတ် ပေးနိုင်ခြင်း။
၈။ သွားခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းများအား Online တွင် Play back ကို (၆) လ စာပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
၉။ မိမိ သတ်မှတ်ပေးထားသော ဧရိယာ ကျော်လွန် သွားပါက Alarm လာပေးသော စနစ်ပါရှိခြင်း။
It is going to be the season for harvesting crop and planting beans soon. So, if you will install GPS devices on your harvesters and lathe machines, you can calculate the total working acres withinaday and they can see working fromafarm to another as you are following with them. The only thing you need to do is relax and just watching from home